विश्वकप फुटबल हेर्न फ्यान अार्इडी अनिवार्य हुनैपर्ने | Suvadin !
विश्वकप फुटबल हेर्न फ्यान अार्इडी अनिवार्य हुनैपर्ने
३२ राष्ट्रका ७ सय ३६ खेलाडी र कयाैँ संख्यामा विश्वकप अवलोकन गर्न अाउने विदेशी पर्यटकहरूको सुरक्षाको जिम्मा रसिया सरकारको भएकाले पनि त्यति सहज भने छैन। रसिया सरकारले यी सबै सुरक्षा व्यवस्थामा कडार्इ गर्न र विश्वकपको दाैरान उनीहरूलार्इ कुनै किसिमको असुरक्षित महसुस नहोस भनेर करोडाै रकम सुरक्षाका लागि खर्चिएको छ। साथै सुरक्षालार्इ मध्ये नजर गर्दै प्रहरीहरू प्रशस्त रूपमा परिचालन गरिएको छ।
Jun 12, 2018 16:46
Shared: 8 times | Share this on
काठमाडाैं, २९ जेठ – रसियाका लागि विश्वकप सुरक्षित र सफलतापुर्वक सम्पन्न गर्ने निकै चुनाैतीको रूपमा हेरिएको छ। रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्रपति भएपनि सुरक्षाको दृश्टिकोणले हेर्दा रसियालार्इ बसोबास गर्न असुरक्षित राष्ट्रको रूपमा हेरिन्छ। विद्रोही समुह बकोहराम लगाएतको लफडा भएकै कारण पनि रसियालार्इ असुरक्षित भन्ने गरेको पाइन्छ।
रसियाले विश्वकप फुटबल अवलोकन गर्न टिकटले मात्र नहुने र फ्यान आईडी अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने बताएको छ। साथै रंगशालाको पनि सुरक्षा व्यवस्थामा कडार्इ गरिएको छ। त्यस्तै रंगशालामा स्क्रिनिङ एरिया,ब्यागहरू सर्च गरिनेछ।
रंगशालाको कतिपय स्थानमा प्रवेश निषेध समेत गरिएको छ भने कति रंगाशालामा खेल अन्त्य नहुन्जेलसम्म ब्याग लग्न समेत रोक लगाइएको छ। रसियामा फ्यान अार्इडी भएका व्यक्तिहरूलार्इ गाडीमा समेत भाडा तिर्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
फ्यान आईडी के हो? कसरी बन्छ?
अहिलेको विश्वकपमा फुटबल हेर्नको लागि टिकट मात्र भएर हुँदैन। स्टेडियममा छिर्नको लागि फोटो सहितको फ्यान आईडी अनिवार्य छ। टिकट छ तर आइडी छैन भने खेल हेर्नबाट बन्चित हुनु पर्नेछ। विशेष त यो सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट निकै उपयोगी र महत्वपूर्ण छ।
यो आईडी तयार गर्दा पासपोर्टको सम्पूर्ण डिटेलसहित व्यक्तिको पहिचान खुल्ने सबै विवरण बुझाउनु पर्छ। टिकटमा फोटो हुँदैन, तर फोटो सहितको फ्यान आईडी लगाएर खेल हेर्दा, कुनै अपि्रय घटना भइहालेमा पनि व्यक्तिको पहिचान खुल्छ। यो व्यवस्थाले गर्दा स्टेडियममा अभद्र व्यवहार प्रस्तुत गर्ने दर्शकलाई पनि सजग रहन बाध्य गराउने छ।
भिसा नचाहिने, गाडी भाडा तिर्न नपर्ने
बाहिर चर्चा गरिएजस्तो यहाँको सुरक्षा व्यवस्था फितलो छैन। प्रविधिको विकाससँगै फुटबल हेर्नको लागि फ्यान कार्डको व्यवस्था रुसबाट नै शुरु भएको छ। सम्भवत यो नयाँ प्रविधि हो। यसअघि कहिल्यै भएको थिएन।
संसारभरका टिकट किन्ने दर्शकहरुलाई फ्यान आईडी प्रदान गरिएको छ। निःशुल्क प्रदान गरिने फ्यान आइडीले रसियाको भिसाको समेत काम गरेको छ। यो भएपछि भिसा लगाउन जरुरी छैन। साथै खेल हेर्दाको दिन मेट्रो, रेल सेवा अन्य यातायातमा समेत फ्री व्यवस्था गरिएको छ। यसैको माध्यमबाट रुसमा विश्वकपसँगै लाखौ पर्यटकहरु भित्रने अनुमान पनि छ।